Homeराशिफलपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,भोलि मिति २०७७ माघ २७ गते मंगलबारको राशिफल हे’र्नुहोस
February 8, 2021 admin राशिफल 2751
मेष राशि चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ :
नयाँ मित्रहरु सगँ को भेट घाटमा सा’मान्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भा’बना रहेको छ । अचल सम्पतीमा ह्रास आउनाले कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । मान्यजनको साथ छुट्नाले सा’मान्य चिन्ता सहनु पर्ला । परिवारको मार्ग’दशर्न नमान्दा कार्यको क्षेत्रमा अपजस खेप्नु पर्नेछ ।
आम्दा’नि मध्यम रहेता पनि बोलिको कारण साधारण दुर्घटनाको सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले सहका’र्यमा झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ । कुनै पनि निर्णय हतासमा नगरैकै बेश हुनेछ । दाजुभाई बिच मन’मुटाब रहन सक्ला । कामको क्षेत्रबाट सामान्य झ’न्जट ब्यर्होनु पर्ला । मालसामान हराउन सक्ला ।
जिबन साथीको सह’योगले गरिएको ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । बोलिको प्रभु’त्वले मानसम्मानको प्राप्ति हुनेछ । मान्यजनको साथ स’हयोग द्वारा गरीएका कार्यहरु सजिलै पुर्ण हुनेछन । बोलिको प्रभाबको कारण मान्यजन को साथ पाईनेछ । कार्य सम्पा’दनका क्षेत्रमा सावधानि साथै गोप्य’ता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
शुभ चिन्तकको बृद्यि हुनाले मनमा उत्सा’ह बढ्नेछ । परोपकारको क्षेत्रमा समय र धन खर्चनु पर्ने समय रहेको छ । अरुको पुर्ण बिश्वासले तपाईलाई आघा’त दिलाउला । सन्चित रकम खर्चको योग रहेको छ । नयाँ कामको थालनि नगरेकै बेश होला । कामको क्षेत्रबाट सामान्य झन्ज’ट ब्यर्होनु पर्ला ।
आफु भन्दा सानाको सहयोगमा गरिएको कार्यहरु सफल रहनेछन । बौधिक ब्य’क्तित्व सगँको सामिप्यता आगामी दिनलाई मार्गदर्शन बन्नेछ । मातृ पक्षको स्वास्थमा देखापरेको असरले सामान्य समस्या पैदा गर्न सक्नेछ । गरिरहेको काममा त्यती मन नलाग्ना’ने सामान्य अप्जस आईपर्ने छ । ब्यापार ब्यबसा’यमा रामा्रे समय रहेको छ ।
सामान्य कठि’नाई पश्चात मनग्य आम्दानीका स्रोतहरु फेला पर्नाले मन उत्साहित रहनेछ । पारीवारिक झो’रझमेलाको फन्दामा परिनाले दिन निरासा पुर्ण रहला । कार्य क्षेत्रमा लगाईको श्रमको उचित मुल्यांकन हुनेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेका कार्य सम्पा’दनमा निकै संघर्ष गर्नु पर्नेछ ।
आटँ शाहसको कमीले कार्यमा ब्यबधान आउला । प्रतिपक्क्षी सबल रहनाले तपाईलाई आफ्नु कमजो’रीको महसुस हुनेछ । मनोरञ्जन पुर्ण यात्राको योग रहेको छ । हतासमा गरीएको कार्यले झन्झट दिलाउला । पारीवारिक सम्ब’न्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ । भोगबि’लासमा समय ब्यतित हुनेछ ।
बृश्चिक राशि तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु :
स्वास्थमा आएको खराबिले कार्यमा ढिलाई उ’त्पन्न गराउनेछ ।सन्तान सम्बन्धी सम’स्याले सताउला । अरुको अनुशरणले तपाईलाई समान्य झन्झट वा अपजस दिलाउन सक्नेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दम्पति बिच सामान्य मनमु’टाब रहला । बाणी तथा स्वास्थ क्षेत्रमा ध्यान दिएको बेश हूनेछ ।
जिबन साथीको सहयोगले ब्यापार ब्यव’सायमा सुधार आउनेछ । जिद्यी स्वभाब तथा अरुले देखाएको बाटो अनुशरण नगर्नाले सामान्य दुर्घटना निम्त्याउला । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु होला । सहि निर्णय हुन नसक्दा परि’बारीक कलहको सामाना गनुपर्नेछ । यापार ब्यवसायमा समय खर्चि’दा उत्तम रहनेछ ।
म’कर राशि भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि :
आफ्नु प्रिय ब्यक्ति सगँको बियोगले मन निरुत्साहित रहला । अन्य ब्यक्तिको बिश्वास गर्ने बानिमा सुधा’र ल्याउनु पर्नेछ । लापरबाहले धनमालमा सामान्य क्षति हुने सम्भाबना रहेको छ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । मान्य’जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ ।
कु’म्भ राशि गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द :
आम्दानी बृद्यिका लागी बीद्योत ब्यक्तित्वहरुको मार्गदर्शन अबलंबन गर्नु लाभदाइक रहला । मित्र जनकोृ सह’योग बाट मन प्रशन्न रहला । बोलिको कारण साथि भाई टाढिन सक्छन । आय आम्दानिका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसिक तना’वका कारण कार्य सम्पादनमा झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मिन राशि दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि :
स्वास्थ सम्बन्धी सामान्य समस्या’ले मनमा तनाब उत्पन्न गराउन सक्ला । परीस्थीति सगँ जुध्ने क्षम’तामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । परिवारको सहयोगले बौधिक तथा आर्थीक बिकासको बाटो फेला पर्ने छ । मेहेनत को रामा्रे फल प्राप्त हु्नेछ । ब्यापार ब्यब’सायमा रामा्रे समय रहेको छ ।
परालको माचमाथि यस्तो दृश्य खि’च्दा लजाए शिशिर भण्डारी र सुनिशा (भिडियो सहित)
June 18, 2021 admin राशिफल 1798
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अनावश्यक खर्चको सम्भा’बना रहेकोछ । कार्यसम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित रहनेछ । स्वास्थमा सा’मान्य समस्या देखा पर्नेछन । हरकोहीको
May 1, 2021 admin राशिफल 2801
April 8, 2021 admin राशिफल 2265
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नयाँ कार्यको था’लनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । साजेदारी कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । आफुभन्दा सानाको सह”योगमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ ।
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209348)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206948)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206738)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194620)